Usoro kacha mma iji mụta igwe mmụta na mmụta miri emi - Ikkaro
Inicio >> Igwe ihe igwe >> Usoro ọmụmụ iji mụta Ngwa igwe, Mmụta miri emi na ọgụgụ isi
Usoro ọmụmụ iji mụta Ngwa igwe, Mmụta miri emi na ọgụgụ isi
site Nacho morato
Ihe ndị a bụ akụ kacha mma m na-achọ ịmụ maka igwe mmụta igwe, mmụta miri emi na isiokwu ọgụgụ isi ndị ọzọ.
Enwere nkuzi n'efu na nke akwụrụ ụgwọ yana ọkwa dị iche iche. N'ezie, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ n'asụsụ Spanish, ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ Bekee.
Usoro nkuzi n'efu
Maka ndị mbido
Ana m ekewa ya n'ime obere ọmụmụ (site na 1 ruo 20 awa). Ndị a bụ maka izizi mbụ na isiokwu a.
Ntinye aka na Igwe Igwe site na Kaggle Obere, naanị awa 3
Ngwaọrụ Igwe Mkpọrọ Ngwa nke Google jiri TensorFlow APIs (awa 15)
Ntinye aka na mmụta miri emi site na Kaggle Oge 4 iji mụta DL na TensorFlow. Mụọ echiche ndị bụ isi nke Igwe Ngwa ma wuo ụdị mbụ gị.
Stanford Classes IA ọhụụ ndepụta YouTube nke klas Stanford iji mụta ọhụụ kọmputa na AI (awa 20)
Okwu Mmalite nke mmụta miri emi by Onyeka Onwenu Ọ bụ naanị maka ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ mbụ mana anyị nwere ike ịhụ vidiyo nke klaasị.
Ihe nke AI. Okwu mmalite maka ọgụgụ isi Artificial maka NON-ọkachamara site na Mahadum Helsinki.
Usoro zuru ezu, site na onye mbido ruo n'ọganihu
Nkuzi igwe site n'aka Andrew ng Eleghị anya, ML bụ nke kacha ochie na ama ama. Agara m ya n'afọ gara aga. Ọ bụ nnọọ usoro iwu. You mụtara ntọala nke etu esi arụ ọrụ igwe mana echere m na ọ chọrọ ibu ọrụ bara uru karị. N'aka ekpe njikọ maka nyocha na m mere usoro a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ya.
N'ezie ngwa ngwa AI site na fast.ai
Mmụta Igwe na etiti kuziri site Kaggle bụ n'ihu nke mbido N'ezie anyị hụrụ na mbụ. Ga-enweta ụdị ziri ezi na nke bara uru karị.
Ihe omumu nke Google (Ọnwa 3) (Nke etiti na ọkwa dị elu) Mepụtara site na Audacity na Vincent Vanhoucke, Onye isi Scientist na Google, na teknụzụ na-arụ ọrụ na Google Brain.
N'ezie ihe kachasị mma iji mụta Mmụta miri emi na Nkuzi igwe.
Omumu ihe omumu by Mụọ miri emi AI - Ọ bụ otu nkuzi pụrụ iche na nkuzi mmụta na mmụta miri emi. Master Deep Learning, na iwebata na ọgụgụ isi. Usoro nkuzi pụrụ iche nke Andrew Ng duziri iji mụta DL. Ọ bụ usoro a kwụrụ ụgwọ, ọ nwere obere akwụkwọ 5 ma ị na-akwụ $ 40 kwa ọnwa ruo mgbe ị gwụchara ya (a na-eme atụmatụ ya ihe dị ka ọnwa 3 - ihe dị ka awa 11 n'izu mana ị nwere ike ịme ya na ike gị. Usoro ise ahụ bụ:
Netwọ Netị na Mmụta miri emi
Kwalite Netwọk Ntanetị miri emi: Hyperparameter n'iji ya, Iwu na njikarịcha
Structuring Ngwaọrụ Mgbakọ
Asọmpi Kaggle Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji tinye ihe niile ị na-amụta n'ọrụ ma yabụ ịmụtakwu ihe na n'ezie. Ndị a bụ asọmpi n'ezie ebe ha na-ewetara anyị nsogbu ma na-enye anyị datasets.
Na iji mezue ozi na ihe ndị na-adọrọ mmasị gbasara Artificial Intelligence akwụkwọ a
Denye aha na listi nzipu ozi anyi
Agụọla m ma nabata usoro na ọnọdụ
Wepụ ala a ma ọ bụrụ na ị bụ mmadụ:
Omimi mmụta akwụkwọ
Python maka Data Science
Otu n'ime isi nkà a chọrọ iji mụta, ma ọ bụ karịa ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ma jiri ML, DL na AI bụ ịmara Python. Anyị nwekwara ike iji R ma ọ bụ asụsụ mmemme ndị ọzọ mana Python bụ ebe a na-ejikarị ma ana m akwado iji ya ebe ọ ga-arụ ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ.
Na Kaggle ị nwere ike ịchọta obere ụzọ nwere ọdịnaya dị mkpa maka ndị mbido na-emetụbeghị ụdị aka ike.
Aga m eji ihe dị jụụ m na-achọta na-emelite ndepụta ahụ. Ọ bụrụ na ị maara nke ọ bụla edepụtaghị, ị nwere ike ịhapụ azịza.
O nwere ike ịmasị gị:
Etu esi etinye Keras na TensorFlow site na azu na Ubuntu
Isiokwu ọhụrụ na usoro ọhụụ nke weebụ
Anaconda Tutorial: Ihe ọ bụ, otu esi etinye ya na otu esi eji ya
M laghachiri na ọwa YouTube iji gbakwunye ozi
Otu esi eme snow snow
Ithaca nke Cavafis
Otu esi ahụ paswọọdụ zoro ezo na ntụpọ ma ọ bụ akara mmuke
Bluewa na-acha anụnụ anụnụ. Coursezọ oké osimiri, ọdịnihu nke ...
Categories Igwe ihe igwe Igodo bọtịnụ
Otu esi emeghari uzo eji ekpochapu mmiri iji mee ihe na nke pere mpe
Uru nke ochichi onye kwuo uche ya
1 Usoro nkuzi n'efu
1.1 Maka ndị mbido
2 Usoro zuru ezu, site na onye mbido ruo n'ọganihu
3 Usoro nkuzi
4 Ihe ndi ozo
6 Python maka Data Science